HALISTA ISA SOO TARAYSA IYO DHAYALSIGA XUKUUMADDA” Cali gurey’ | Saxil News Network
HALISTA ISA SOO TARAYSA IYO DHAYALSIGA XUKUUMADDA” Cali gurey’
Hargeisa (Saxilnews.com).Marka dil dhaco een laba Cali is waydiin waayo sidee iyo yaa ka masuul ah,ee haba yaraato eh aan inaba baadhis lagu qanci karo la samaynin waa ta keeneysa in si dhib yar dad aan hubaysnayn xabad loogu dhfto. Mararka qaarkood waxaba la is waydiiyaa Ciidanka yaa diray? waana la garan waayaa cid dirtay oo qiraal ah intii loo nisbaynayayna ma ogin bay warkooda ku soo baan.
Marar badan in la baadho oo la runta la ogaado waaba la diidaa. Yaa diida? Mooyi! Dhayalsiga xukuumadda ee khatartan isa soo taraysaa wax la aqbali karo maaha waana miino dagaraysan oo aynu ku dul fadhino markay doontona inagu qarxi karta hadii la dhayalsado.
Bal dib u eega inta sarkaal ciidamada ka tirsan ee milatari iyo BIlaysba leh askari ciidankiisa ihi aad yar xabad iskaga dhuftay ee xukuumaddu uba arkin dhibaato culus iyo fidmo hor leh oo la kowsatay xukuumadan una baahan in wax laga qabto. Alleh ha inoo sahlo waxan dhacayaa hadii aanay Xukuumaddu waxba ka qaban wixii ila hadda dhacayna aan baadhis rasmi ah la baadhin meel baas iyo ka sii daran uun weeye waxa aynu ka filaa.
Qoyskii Mujahid Axmed
Jabaan ee RRUdu weerartay daraad galab waxa ku dhintay ilmo yar oo 11 jir ah qaar kalena way ku dhaawacmeen. Saaxiib kaygii halganka oo mujaahidiinta ugu qaalisan ka mid ahaa xiligii halganka wax ka badan in aan tacsiyeeyo oon maanta tari karaa ma jirto. Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo qoyskiisa oo dhan bedel khayr lehna ha siiyo
Aniga iyo Axmed Jabaan waxanu ka mid ahayn ceelalyadii ka soo hor martay Colwaynihii SNM ee soo galay Hargeysa 31 May 1988kii oo ahayd sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegtay dilkii Alleh ha u naxariisto labdoodaba eh Muj. Aden Shiine iyo Muj. Siyaad oo lagu dilay Jigjiga 31 May 1987kii.
Goor caways ah ayaanu tuulada Xareed ugu nimi Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxumed Gadhyogol oo aanu cabaar la fadhinay meel ardaa ah. Markii aanu kala war qaadanay waxna afka gelinay Sheekh Candiraxmaana noo duceeyay ayaanu bartii ku tashanay anaga oo 16 Mujaahid ah lix aanu Hargeysa ku soo galay mooyee tobankii kale oo Axmed Jabaan laftiisu horjooge u yahay waxay abaareen inay kala diraan labadii xero qaxoonti ee Laas Dhuure iyo Agabar oo ay ku jireen isu geyn sodon ilaa konton kun waanay ku guulaysteen. Taas ayaa u suurtogelisay in Ciidankii SNM uu ku negaan karo kuna dhex dagaalami karo magaalada gudaheeda in ka badan todobaatan maalmood iyo weliba in Rugta Dhaawaca iyo taakilaynta ay ka dhigan karaan Geed deeble iyo xataa in dadkii ka baro kacay magaaladu ay dooxyada waqooyiga Hargeysa ku badbaadaan. Iyo weliba in la Badbaadin karo biyaha Geed deeble oo mar ay isku dayeen inay qarxiyaan ciidan xero tababar looga furay Geed deeble oo xeryaha qaxoontiga laga qoray.
Maanta waxa nasiib darro ah inu ku amaangeli waayo buqcad yar oo muddo dheer uu nootaayo yar ku haystay inaga oo og kuwo fooqyada loo dhisay dhulkii dadwaynahana sida gaarka ah loo mulkisiiyay
By Mahamed Hassan Adam (Faradeero)